केराले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ? जान्नुहोस् केरा खाँनुका फाइदाहरु | Seto Khabar
२०७९ बैशाख १४, बुधबार (३ हफ्ता अघि)
काठमाडौँ, १४ बैशाख । केरा खानुका धेरै फाइदा छन् । यो फल तपाईको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ तर के तपाईलाई थाहा छ केरा खानाले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन ? केरामा पोटासियम र क्याल्सियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसको सेवनले रक्तचाप मात्र नियन्त्रणमा रहँदैन योसँगै हड्डी पनि बलियो हुन्छ । गर्मीमा केरालाई ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि मानिन्छ। त्यसैले कतिपय मानिसहरु दैनिक केरा खान रुचाउँछन् । त्यसोभए केरा खानुका अन्य फाइदाहरू के के छन् जानौं।
केराले छिट्टै पेट भर्छ
केरामा प्रशस्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ । यसको सेवनले छिट्टै पेट भरिन्छ । अफिस वा कलेज जाँदा बिहानको खाजा छुट्यो भने केरा खाएर बाहिर जानुहोस्, किनभने केरा खाँदा तत्काल ऊर्जा मिल्छ ।
केरा तनाव कम गर्न पनि धेरै लाभदायक छ। वास्तवमा केरामा ट्रिप्टोफान नामक तत्व पाइन्छ । यो ट्रिप्टोफ्यानको कारणले हाम्रो शरीरमा सेरोटोनिन बन्ने गर्छ। सेरोटोनिनलाई खुशीको हर्मोन पनि भनिन्छ। यसले तनावलाई टाढा राख्छ।
पाचन सम्बन्धी समस्या टाढा रहनेछ
पाचन सम्बन्धी समस्या हटाउन पनि केरा निकै फाइदाजनक हुन्छ । वास्तवमा, केरामा पाइने स्टार्च हाम्रो पाचन प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण राम्रो ब्याक्टेरियाका लागि फाइदाजनक हुन्छ। केरा एसिड विरोधी पनि हो, त्यसैले यदि तपाईलाई पेट दुख्ने समस्या छ भने केराको सेवनले तपाईलाई फाइदा गर्छ ।
हड्डी बलियो बनाउछ
यसका साथै हड्डी बलियो बनाउन केराको सेवन गर्नुपर्छ । अधिकांश मानिसहरू ३० वर्षको उमेर पार गरेपछि हड्डी दुख्ने समस्या बल्झीन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले दैनिक एउटा केरा खानुपर्छ जसले तपाईको हड्डी बलियो बनाउन मद्यत गर्छ ।